Farmajo oo sacado un ka hor Bajiyay safarkiisi qatar iyo sababta | Puntland
Farmajo oo sacado un ka hor Bajiyay safarkiisi qatar iyo sababta
Madaxweynaha Jamhuriyada Federalka Soomaaliya Mudane Maxamed C/llaahi Farmaajo ayaa baajiyay safar lagu waday in maanta oo Axad ah uu ku tago dalka Qatar, sababo la xiriira khilaafka siyaasadeed ee soo kala dhex galay Jawaari iyo Khayre.
Wararka ayaa sheegaya in saacadihii u dambeeyay uu Madaxweynuhu go’aansaday inuu baajiyo safarkiisa Qatar, kaddib markii lagula taliyay in aanu dalka ka ambabixin, iyadoo uu qalalaase siyaasadeed ka jiro.
Ilo ku dhow dhow Madaxtooyada Vila soomaaliya ayaa sheegaya in Madaxweyne Farmaajo uu guda geli doono xalinta khilaafka siyaasadeed ee u dhaxeeya Labada Mudane .
Inkastoo Madaxweynuhu aanu wali ka hadlin khilaafkan iyo mowqifkiisa, hadana waxaa jira cadaadisyo uga imaanayay Xildhibaanada Golaha shacabka, kaasoo ku aadan inuu soo farageliyo kana hadlo khilaafka.
Madaxweyne Farmaajo ayaa tan iyo markii uu soo ifbaxay khilaafka Hey’addaha Sharci dejinta iyo Fulinta hoy iyo xafiis u aheyd Xarunta Wasaaradda Gaashaandhigga, halkaasoo howl maalmeedkiisa shaqo uu u wareejiyay.
Khilaafka u dhaxeeya Baarlamaanka iyo Xukuumadda ayaa saameyn ku yeeshay howlihii dowladda, kaddib markii ay hareeyeen mooshino iska soo horjeeda iyo kulamo siyaasadeed habeen iyo maalin aan loogu kala kicin.